गायक सुरेश चोखालको ह्याँङ गर्योमा मोडल करिश्माको बोल्ड डान्स [भिडियो ]::Best News Portal In Nepal, Business News, Political, Social, Science, Economy, Social, Entertainment, Nepali Model, Movies, Actors, Actor, Interview, Audio & Video.
गायक सुरेश चोखालको ह्याँङ गर्योमा मोडल करिश्माको बोल्ड डान्स [भिडियो ]
काठमाडौँ- आफ्नु छुट्टै पहिचान बनाउन सफल कम्पनि तिर्सना म्युजिक प्रा.ली. बाट दिन प्रतिदिन गित आउने जारि रहेको छ । केहि दिन अगाडी मात्र गायक सुरेश चोखालको देउडा डिजे गित “ह्याँङ गर्यो” सार्बजनिक भएको हो ।
सबै खाले गीतसंगीत आइरहेको बेला यतिबेला भने केहि दिनमै “ह्याँङ गर्यो” ले सफलता पाउन सफल भएको छ । गायक सुरेश चोखाल गित संगीतमा निरन्तर लागि रहेको एक कुशल गाएक भित्र पर्छन्। धेरै नबोल्नी सबैको लोकप्रिय बन्दै गएका चोखाल गित संगीतमा भने एक दम पहिला देखिनै रुची राख्ने गर्थे ।
मिडिया डबली संग कुरा गर्दै चोखालले भने यसै क्षेत्रमा केहि गरु भन्नि छ ! “ह्याँङ गर्यो” ले केहि मलाई चिनायो, मलाई मायाँ गर्नु हुने सबै दर्शकलाई सम्झिन चाहान्छु ।
शुशील बोहोराको शब्द तथा संगीतमा रहेको उक्त गीतमा मोडल करिश्मा ढकाल, शासन र अर्जुनको जोडदार अभिनय देख्न सकिन्छ ।
जयराम थापाको निर्देशनमा तयार भएको भिडियोमा सम्पादन तथा छायांकन विजय तिखातरीको रहेको छ ।
सेक्स कतिबेला गर्दा महिला–पुरुष दुवैलाई बढी उत्तम ? थाहा पाइराख्नुस् यी फाइदा
गीतकार तथा गायिका गायत्री थापा ‘जनसेवा श्री सम्मान’
चर्चित संगीतकार केशब र गायक रामजीले दिए ३ करोड जनतालाई नयां बर्षको शुभकामना